Uyijonga njani iMpumelelo yezeNtlalo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 7, 2015 Douglas Karr
Ukulinganisa impumelelo kwimidiya yoluntu kunzima kunokuba uninzi lwabantu lukholelwa. Imidiya yoluntu inemilinganiselo emithathu:
Ukuguqula ngokuthe ngqo - kulapho uninzi lwentengiso lujonge ukulinganisa imbuyekezo kutyalo mali. Ikhonkco lizisa undwendwe ngokuthe ngqo kwiposti yemidiya yoluntu okanye wabelane ngalo kuguquko. Nangona kunjalo, andikholelwa ukuba kulapho uninzi lwe-ROI lukhona.
Ukuphembelela ukuguqulwa -Ukuba noluntu olufanelekileyo oluphethe igama lakho lunamandla amakhulu. Ndingathumela malunga nemveliso okanye inkonzo, loo nkonzo kwabelwana ngayo ngabaphulaphuli bethu, emva koko umntu ngaphakathi kwenethiwekhi yabaphulaphuli acofe kwaye aguquke. Ndiyakholelwa ukuba le inefuthe elikhulu kunotshintsho oluthe ngqo (nangona ndingenayo idatha yokuyibuyisela umva).
Momentum -Kuhambeni kwexesha, ukwakha abaphulaphuli kunye noluntu kwimidiya yoluntu kuqhuba ulwazi, igunya kunye nentembelo. Ukuthembana ekugqibeleni kukhokelela kwinqanaba eliphezulu lokuguqula. Olu tshintsho alunakuba lubandakanyeke ngqo kuhlaziyo lweendaba zentlalo okanye isabelo. Nangona kunjalo, inyani yokuba umxholo wakho ukhona kwabelwana kwaye oku kulandelayo kuyakhula kokubini kukuchaphazela ukufikelela kwakho kunye nokukwazi ukuguqula.
le infographic evela kwintengiso wenza umsebenzi obalaseleyo wokujonga iimpembelelo zemidiya yoluntu ngokubanzi. Inyani yile yokuba ayizizo zonke izibonelelo zosasazo lwentlalo eziza kubangela ukufunyanwa kwabathengi okukhulu, imithombo yeendaba zentlalo ikwachaphazela ukubanakho kokuthengisa kunye nokugcina abathengi bakho.
Unemetrikhi ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele xa useta impumelelo yephulo lakho. Xa kuziwa ekuhlalutyeni idatha kwizithuba zakho, iitweets, kunye neengxoxo, kuya kufuneka ukwazi ukutolika idatha kuthungelwano ngalunye lweendaba zentlalo. Ukulinganisa impumelelo yakho kwezentlalo kunye neeflops, kwaye wenze indawo nganye yemithombo yeendaba kube lula ukuyihlalutya, cinga ngokusebenzisa izixhobo zomntu wesithathu.
Ngobungakanani engqondweni, ukusebenza kweendaba zosasazo kuhlala kuyinto khokela Isalathiso sempumelelo yeqhinga lakho lokuzibandakanya. Imbuyekezo kutyalo-mali iya kunyuka ngokuhamba kwexesha njengoko uqhubeka nokukhulisa ukufikelela kwakho kunye negunya, ke iinjongo zakho ziya kudinga ukulungiswa ngokuqhubekayo. Le infographic yenza umsebenzi omkhulu wokubonelela ngeemetrikhi onokuzijonga kwiqonga ngalinye leendaba ezentlalo.
Siyaqhubeka nokukhulisa ifuthe lesicwangciso-qhinga sethu seendaba zosasazo ngokuzibandakanya nabashukumisi, ukophula nokwabelana ngomxholo omangalisayo oxabisekileyo kubaphulaphuli bethu, kunye nokukhuthaza umxholo wethu kunye neminikelo ngqo kubo. Injongo yethu asikuko thengisa, Kukubonelela ngexabiso elikhulu kangangokuba wena-abalandeli bethu- awufuni ukuhamba kwaye uqhubeke nokwabelana ngento esabelana ngayo.
Khumbula-gxila kwimikhwa yeemeta zakho, hayi amanqaku edatha akhawulezileyo! Ukukhula kwempembelelo yemidiya yoluntu kubalulekile kwimpumelelo yakho.
tags: izinto ezilungileyoI-facebook metricsindlela yokulinganisa imidiya yoluntui-metrics edibeneyoiinjongo smartImidiya yokuncokolaiinjongo zeendaba ezentlaloimilinganiselo yemidiya yoluntuiithayile zemidiya yoluntuIimpawu ze-twitter
Oktobha 8, 2015 ngo-12: 44 PM
Iposti enkulu! Ndihlala ndisithi ukuthengisa kunye nokunikezela zii-2 zezinto eziphambili kwi-ROI yentlalo. I-infographic eyoyikisayo nangona uchanekile.
Okt 13, 2015 ngexesha 4:37 AM
Ewe imithombo yeendaba zentlalo inamandla kakhulu ukuba siyisebenzisa ngokufanelekileyo kodwa ukulinganisa impumelelo kunzima kakhulu, apha kweli nqaku / infographic ikhankanywe ngokucacileyo indlela yokulinganisa iziphumo zosasazo lwentlalo, uguquko lwempembelelo lubaluleke kakhulu ukuba sifuna impumelelo kwikhondo lethu lomsebenzi.
Enkosi kakhulu ngokwabelana ngolwazi, siza kubona kungekudala.